McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Pamela Wheelock oo ah Madaxweynaha Ku-meel-gaarka ah
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay ku faraxsantahay inay soo dhaweyso Pamela (Pam) Wheelock oo ah madaxweynaha ku meel gaarka ah. Waxay ku biiri doontaa Aasaasiga markay tahay Febraayo 4, 2020, waxayna sii joogi doontaa doorka halka McKnight ay waddo raadinta qaran ee madaxweyne cusub bilaha soo socda. Wheelock wuxuu keenay sanado badan oo waayo aragnimo ah qaybaha bulshada, khaaska ah, iyo samafalka waana hogaamiye si wanaagsan loo ixtiraamo oo la ilaaliyo oo mutadawiciin ah kuna nool Minnesota oo dhan.
“Pam waa sharaf weyn oo reer Minnesota ah waana shaqsi dowladeed oo heersare ah oo keena khibrad hogaamineed oo aan caadi aheyn shaqadeeda guud ahaan,” ayuu yiri Debby Landesman, madaxa guddiga McKnight. "Aad ayaan ugu faraxsanahay inay nagu soo biiri doonto waqtigan."
Xirfad Dhiman oo Xaddidan oo Dhan Dhinacyo Badan Dhow
Wheelock waxay u timaadaa McKnight iyada oo leh khibrad balaaran oo ka soo qaadatay shaqadeeda dheer, iyada oo ka soo shaqeysay kaalmaha fulinta ee samafalka, samafalka, tacliinta, ganacsiga, iyo ururada dawlada ee gobolka. Laga soo bilaabo 2017 illaa 2019, waxay ahayd madaxa hawlgalinta Twin Cities Habitat for Humanity. Intaas ka hor, waxay qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin kuxigeenka madaxa adeegyada jaamacadda ee Jaamacadda Minnesota, madaxweynaha ku meel gaarka ah iyo madaxa shirkadda Blue Cross Blue Shield ee Minnesota, madaxweyne ku xigeenka Bush Foundation, iyo kuxigeenka madaxa fulinta iyo madaxa dhaqaalaha ee waalidka North Wild ee waalidka. shirkada, Minnesota Sports & Entertainment.
Pam waa sharaf weyn oo reer Minnesota ah waana shaqsi dowladeed oo heersare ah kana keena khibrad hogaanimo oo cajiib ah shaqadeeda oo dhan. —DUUCADAHA LANDESMAN, BOARD CHAIR
Deganeyaasha Mataanaha ah ee Magaalada, Wheelock waxay leedahay diiwaan aad u dheer oo ah adeegyo ballaaran oo dadweyne oo loogu talagalay waddankeeda Minnesota. Sanadka 2019, gudoomiye Tim Walz wuxuu u magacaabay kuxigeenka agaasimaha waaxda arimaha bulshada ee gobolka Minnesota. Waxay lataliye aamin ah ka noqotay maamulka Ventura iyadoo loo magacaabay gudoomiyaha maaliyada, waxayna ahayd kuxigeenka duqa iyo agaasimaha qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha Magaalada Saint Paul.
Wheelock waxay xubin ka ahayd guddiyo badan oo ay ka mid yihiin Rochester's Destination Medical Center Corporation, Blue Cross Blue Shield ee Minnesota, Minnesota Wild Foundation, iyo St Catherine University, halkaasoo iyadu sidoo kale ahayd gudoomiye gudoomiye. Iminka waxay madax ka tahay hay'adda Minnesota Wild Foundation. Waxay heysataa shahaadada labaad ee cilmiga sayniska ee jaamacadda Marquette iyo bachelor-ka cilmiga farshaxanka taariikhda St Catherine.
“Farxad ayey ii tahay inaan u adeego hay'adda McKnight Foundation ee kumeel gaarka ah,” ayuu yiri Wheelock. "Waxaa iga go'an inaan horay u sii qaado dhaxalka Mu'asasada - iyo inaan ku taageero guddiga iyo shaqaalaha sii wadidda howlaha muhiimka ah ee McKnight."